PVC ပလပ်စတစ်ကြမ်းပြင်သည်ပေါ့ပါးသည့်ကြမ်းခင်းအလှဆင်ပစ္စည်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးယနေ့ခေတ်တွင်လူကြိုက်များသော“ ပေါ့ပါးကြမ်းခင်းပစ္စည်း” ဟုလည်းလူသိများသည်။ ၎င်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရှိအကြီးစားနှင့်အလတ်စားမြို့ကြီးများတွင်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်အသိအမှတ်ပြုထားပြီးကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်။ PVC ပလပ်စတစ်ကြမ်းပြင်ဟက် ...
PVC ပလပ်စတစ်ကြမ်းခင်းကြမ်းခင်းကိုစီးပွားဖြစ်နှင့်လူနေအိမ်ရာနေရာများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်သင်သည် elastic ကြမ်းခင်းကိုကြာရှည်စွာတောက်ပနေစေလိုလျှင်အသုံးပြုမှုလုပ်ငန်းစဉ်၌ဤအရာများကိုလုပ်ဆောင်ရမည်။ သန့်ရှင်းအောင်ထားပါသန့်ရှင်းရေးမသုံးပါနဲ့။
မည်သည့် PVC ကြမ်းပြင်သည်ပွန်းပဲ့ပျက်စီးမှုကိုအကောင်းဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိသနည်း။
2021-04-16 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
PVC ကြမ်းခင်းများ၏ ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သုံးစွဲသူများသည်အမြဲတမ်းသတိထားရမည့်အဓိကအချက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ PVC အခင်း၏ wear ခံနိုင်ရည်သည်သူ့ဟာသူနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည်။ PVC ကြမ်းခင်းကိုယေဘုယျအားဖြင့်သုံးမျိုးခွဲခြားသည်။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအောက်၊ အမြှုပ်အောက်နှင့်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းနှင့်ပွင့်လင်းခြင်း ...
သူနာပြုအိမ်များအတွက် PVC ကြမ်းပြင်နှင့်ကိုက်ညီသောစွမ်းရည်
2021-03-22 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း၌အခွင့်မသာသည့်အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သက်တောင့်သက်သာရှိသော၊ ကြော့ရှင်းပြီးရိုးရှင်း။ သက်သောင့်သက်သာရှိသောလူနေမှုပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်သူတို့၏နေအိမ်များကိုအလှဆင်ခြင်းသည်သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီအောင်ပြုပြင်ထားရမည်။ ကြမ်းပြင်ကသင့်တော် ...
PVC ကြမ်းခင်းကို install ၏ဘုံပြproblemsနာများ!
2021-03-19 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
PVC အခင်းသည်စျေးကွက်တွင်လူကြိုက်များသောဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းအသစ်ဖြစ်လာသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, တင်သောလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမလျော်ကန်သောဆောက်လုပ်ရေးတစ်ခုလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေလိမ့်မည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည်သင်၏ PVC ကြမ်းခင်း၏ထိရောက်မှုကိုတိုးချဲ့ရန်အထောက်အကူပြုသည့်သာမန်ပြproblemsနာများစွာဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုဘဝ။ ...
PVC ကြမ်းခင်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ Standard- ဥရောပ Standard
PVC ကြမ်းခင်းအတွက်ဥရောပစံကို EN အဖြစ်အတိုကောက်သတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်းသည်မူလကဥရောပစီးပွားရေးအသိုက်အ ၀ န်း၏ ၁၅ နိုင်ငံမှလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သောစမ်းသပ်မှုစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီစမ်းသပ်မှုစံအများအပြားအကြောင်းအရာများသို့ခွဲခြားထားတယ်။ ၎င်းတို့ထဲမှကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏပြောသောတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း TPMF အမျိုးအစားသည်၎င်းမှလာသည်။
တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း PVC ကြမ်းခင်း၏အရည်အသွေးခွဲခြားရန်အဓိကအချက်သုံးချက်
အဘယ်ကြောင့်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဗီနိုင်းကြမ်းပြင်များအတွက်အရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းအပေါ်ခြားနားချက်ရှိသနည်း 1. အလေးချိန် PVC ကြမ်းခင်းကိုအဓိကအားဖြင့် polyvinyl chloride ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကျောက်မှုန့် (calcium carbonate) ပစ္စည်းအနည်းငယ်သာရှိလိမ့်မည်။ ကျောက်မှုန့်ပါ ၀ င်မှုသည် PVC ကြမ်းပြင်၏အလေးချိန်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည် ...
အရင်ကမကုသသောကြမ်းပြင်ပေါ်ရှိကော်ကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲ။ Rag: ကော်ကိုခြောက်သွေ့ပြီးခိုင်မာအောင်မလုပ်ခင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာကပိုကောင်းတယ်။ ဤအချိန်တွင်ကော်သည်အရည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုပြီးနောက်သို့မဟုတ်အထည်ဖြင့်သုတ်ပြီးနောက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးနောက်ကျန်ကော်ကိုသုတ်ပါ။ အရက် - ကြမ်းပြင်ပေါ်ကကော် ...
anti-static PVC ကြမ်းပြင်ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
2021-01-20 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
၁။ မြေကြီးကိုသန့်ရှင်း။ အလယ်လိုင်းကိုရှာပါ။ ပထမ ဦး စွာ၊ မြေကြီးတပြင်ချပ်ချပ်ကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားပါ၊ ထို့နောက်အခန်း၏အလယ်ဗဟိုကိုတိုင်းတာသည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြင့်ရှာပါ၊ အလယ်ဗဟိုမျဉ်းကြောင်းဆွဲပါ။ ၂ ။
၁။ လုံခြုံရေး PVC ကြမ်းခင်းကိုနို့ပုလင်းနှင့်ဆေးကြောသန့်စင်ရန်အတွက် PVC ကုန်ကြမ်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည့်ပစ္စည်းများ၊ “ 0” formaldehyde ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သူကမြှုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်ဖြစ်စေ PVC ကြမ်းပြင်၏အခြားဖြစ်စဉ်များဖြစ်စေ, ၎င်း၏ elasticity အလွန်ကောင်းသောဖြစ်ပါသည်, သော ...
တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဗီနိုင်းကြမ်းပြင်၏ installation လုပ်ငန်းစဉ်ကို
PVC ကြမ်းခင်းသည်ခေတ်မီသောရုံးသုံးအလှဆင်ရာတွင်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ရေစိုခံ၊ မီးခံ၊ အသံတိတ်စသည်ဖြင့်ကောင်းကျိုးများရှိသည်။ အလှဆင်နေစဉ် PVC ကြမ်းခင်း၏ကြမ်းခင်းအဆင့်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ နှင့်မြေပြင်သူ့ဟာသူတန်းတူ။ တကယ်လို့ ...
Giqiu တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဗီနိုင်းကြမ်းပြင်ဖယောင်းမပါဘဲကုသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးပြီးစီးပြီးနောက်၎င်းကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အသုံးပြုစဉ်ကာလအတွင်းလိုအပ်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအပြင်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်နိုင်သော Permeable ကြမ်းခင်းကိုအလုပ်နှင့်နေ့စဉ်ဘဝတို့တွင်သေးငယ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များတွင်အသုံးပြုရမည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစား ...